ओलीले मलाई साह्रो अपमान गर्नुभयो, सहन गाह्रो भएको छ : अष्टलक्ष्मी शाक्य
प्रकाशित मिति : : शुक्रबार, माघ २६, २०७४
एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य चुनाव अघिदेखि नै प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो । तर, शाक्यलाई पराजित गर्दै डोरमणि पौडेल दलको नेता बनेका छन् र उनी नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । चुनावपछि शाक्यसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
तपाईको राजनीतिक इतिहास र योगदानको कुनै अर्थ रहेेन होइन त ? गुटको उम्मेदवार बनिसकेपछि तपाइले यो महसुस गर्नुभयो ?
मेरो इतिहास दुनियाका सामुन्ने छ । मैले गुटबन्दी गरिनँ । म २०२८ देखि यो पार्टीमा लागेँ । २०३६ देखि त भूमिगत नै भएर काम गरेँ । पार्टीमा काम गर्दा बालबच्चा जन्मेका बेला समेत मैले बिदा लिइन । पाँचौ महाधिवेशनदेखि निरन्तर केन्द्रीय कमिटीमा छु ।
प्रदेश संयोजकको हैसियतले मलाई नै पार्टीको सचिवालयले मुख्यमन्त्री बन्ने भनेर प्रदेशमा पठाएको हो तर, आज चरम गुटबन्दीको शिकार भएँ, मलाई जीवनमा सबैभन्दा दुःख लागेको छ ।
एउटा महिला मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जोगाउन शीर्ष नेताहरुबाटै गम्भिर पहल नभएको हो ?
शीर्ष नेताहरुले पहल नगरेको भन्दा पनि पहल पुगेन भन्छु । हाम्रो पार्टीले एउटा इतिहास कायम गर्ने अवसर थियो । तर, सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा त के भने हिजो अध्यक्षलाई भेट्न जाँदा के छ स्थिति भन्नुभयो । मैले जित्छु, तपाईले सहयोग गर्नुस् भनेँ । उहाँले हार्ने गरी नउठ्नुस भन्नुभयो । मैले जित्छु र सघाउनुस् भन्दा त्यसो भए उठ्नुस भन्नुभयो ।
तर, उहाँले यस्तो गरेर छक्याउन हुन्छ ? अहिले आएर सभामुख लिनुस् भन्दा मान्नुभएन भनेर प्रचार गरिएको छ । उहाँले त्यसो भनेको होइन र सभामुख लिनुस् भन्दा मान्नेवाला पनि थिइन । तर, अध्यक्षको तहबाट मविरुद्ध चरम गुटबन्दी भएकोमा स्तब्ध छु ।
भनेको तपाईलाई हराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै लाग्नुभयो ?
उहाँ कति लाग्नुभयो भएन अहिले नै भन्दिन तर, उहाँबाट मलाई छक्याउने काम भयो । मैले सुनिरहेकी छु, प्रदेशका सांसदहरुलाई भेडाबाख्रा जस्तो थुन्ने काम गरियो । विहान सिधै भोट हाल्ने ठाउँमा लिएर आइयो । मलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिन गुटको चरम प्रयोग भयो । म गुटबन्दीको शिकार भएँ । मेरो राजनीतिक इतिहासको धज्जी उडाइयो ।
पार्टीको कमिटीमा आफूभन्दा धेरै जुनियर मान्छेसँग हार्नुभयो । प्रदेशको पार्टी प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईको भूमिका के हुन्छ ?
पहिलो कुरा त प्रदेशसभामा धेरै पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु आउनु भएको छ, जसलाई मेरो अण्डरमा मन्त्री भएर काम गर्न सजिलो थियो । अब त्यो कुरा त रहेन ।
उहाँले कसरी चलाउनुहुन्छ पनि हेर्छु । म पार्टीको प्रदेश संयोजक हुँ । प्रदेश सरकार चलाउन, मन्त्री बनाउन वा अन्य काम गर्न पार्टीको निर्देशन र समन्वय चाहिएला । कसरी काम गर्नु हुँदोरहेछ म हेरौंला ।
तपाईको कुराले त पराजयको पीडा निकै देखियो नि ?
वास्तवमा मैले यस्तो होला भनेर सोचेकी थिइन । गुटबन्दीको यतिसारो शिकार हुँला भनेर सोचेकै थिएन । त्यसैले मलाई धेरै पीडाबोध भएको छ । मलाई मेरो पार्टीको अध्यक्षले यति साह्रो अपमान गर्नुभयो, सहन गाह्रो भएको छ । यसबाट उहाँको हाइट घटेको छ । -अनलाइनखबरबाट
प्रधानमन्त्रीले हामीलाई सौतेलो व्यवहार गरे : निर्मलाका बाबु (भिडियो सहित)
बादल आँखा र कान नभएका गृहमन्त्री हुन् : गोपाल किराँती
गाईजात्रा विशेषः ओलीले विपक्षीलाई ‘गोरु’ भनेपछि